मनकला हत्या प्रकरणः दुई नाबालक भतीजले गरे काकीको हत्या ! – Sky News Nepal
मनकला हत्या प्रकरणः दुई नाबालक भतीजले गरे काकीको हत्या !
१५ श्रावण २०७८, शुक्रबार २०:१९ मा प्रकाशित
राजेन्द्र कार्की / जाजरकोट : रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका ४, की मनकला खत्री खड्कालाई आफ्नै जेठाजुका छोरा (भतीजहरु) ले हत्या गरेको खुलेको छ।
साउन ११ गते सोमबार २६ वर्षीया खड्काको विभत्स हत्यामा भतीजहरुको नै हात रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । घर नजिकै गोठमा रहेका भैंसीलाई घाँस हाल्न गएकी खड्काको धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या भएको अवस्थामा उनको शव भेटियो । त्यसको २ दिनपछि हत्यारा पत्ता लागेका छन् । प्रहरीले मुसिकोटमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी घटनाबारे सार्वजनिक गरेको हो ।
मृतक खड्काकै सहोदर भतीजा जेठाजुका दुई नाबालक छोराले उनको हत्या भएको खुलेको पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक ध्रुवकुमार श्रेष्ठले बताए । १५ र ११ वर्षका दुई सहोदर दाजु(भाइ मिलेर मनकलाको हत्या गरेको डिएसपी श्रेष्ठले बताए ।
नाबालक भएकाले प्रहरीले उनीहरुको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन । मृतकले घाँटी, नाक, कानमा लगाएको गरगहना समेत ती दाजुभाइले घरमा राखेको भेटिएको डिएसपी श्रेष्ठले बताए । मृतकको शरीरबाट हराएका सबै गरगहना, एउटा खुर्पा, उनीहरुले घटनाका बेला लगाएका कपडा पनि प्रहरीले फेला पारेको छ ।
उनीहरुले हत्या गरेको स्वीकारेपछि प्रहरीले उनीहरुलाई फेरि घटनास्थल लिएर आवश्यक प्रमाण संकलन गरेको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट दाजुभाइको संलग्नता देखिएको र बाँकी अनुसन्धान भने भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । पुरानो रिसिवी र परम्परागत मान्यताका कारण घटना भएको निष्कर्ष प्रहरीको छ ।
केही समयअघि मृतक खड्काले १५ वर्षीय ती भतीजलाई १५ हजार नगद चोरी गरेको आरोप लगाएपछि रिसिबी साँध्न घटना भएको प्रहरीको भनाइ छ । घटना भएको दिन मृतकले दाजुभाइले काटेको घाँस नाघेपछि रिसको आवेगमा अन्टीलाई खुर्पा हानेको स्वीकार गरेको डिएसपी श्रेष्ठले बताए ।
मनकलाको हत्या भएपछि ती दाजुभाइ मृतकको कोठामा गएर बाकस समेत खोलेको पुष्टि भएको डिएसपी श्रेष्ठले बताए । प्रहरीले सुरुमा तीन बाबु छोरालाई सोधपुछका लागि ल्याएको थियो । बाँकी अनुसन्धान हुँदै जाने भनेर दुई दाजुभाइले हत्या गरेको विवरण प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको हो ।
घटना अनुसन्धानका लागि प्रहरी तालिमप्राप्त कुकुर झिकाएको थियो । त्यस्तै प्रहरीको कर्णाली प्रदेश कार्यालयबाट अनुसन्धन ब्युरो टोली आएको थियो । प्रहरीले उनीहरु विरुद्ध कर्तव्य ज्यान, चोरी तथा डाँका सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको डिएसपी श्रेष्ठले बताए । मृतकका श्रीमान बैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा देश बाहिर छन् । उनका सात वर्षका छोरा र सासू घरमा छन् । (अन्नपूर्ण पोस्ट)